ईदको दिनमा आईईटीटी उडानहरू कसरी गरिन्छ? | RayHaber | raillynews
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलईदको दिनमा आईईटीटी उडानहरू कसरी गरिन्छ?
22 / 05 / 2020 34 इस्तांबुल, साधारण, राजमार्ग, टायर व्हील प्रणाली, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, MetroBus, टर्की
चाडको दिनमा IETT अभियानहरू कसरी बनाउने
IETT ले छुट्टी भर यात्रीहरू बोक्न जारी राख्दछ। पर्वका दिनहरूमा जहाँ कर्फ्यू लागू हुनेछ, यात्रुहरू शनिबारको शनिबारको तालिका अनुसार शनिबार र अन्य दिनमा आइतवारको तालिका अनुसार बस लाइनमा यात्रा गरिन्छ। कम्तिमा १4 बसहरु चार दिनका लागि अस्पतालहरुका लागि छुट्याइएको थियो। मेट्रोबस लाइन मा, उडानहरु बिहान evening र साँझ 186 मिनेटमा आयोजित गरीन्छ।
युरोपियन र एनाटोलियन पक्षमा जम्मा 498 608 flights उडानहरू पूर्वाह्न र चाडको समयमा जारी रहनेछ। यो शनिबार १,13 vehicles सवारीसँग १ 642२ उडानहरू मिलाउने योजना छ। आइतवार, सोमबार र म Tuesday्गलबार 498 हजार 527 8१ उडानहरू 881 XNUMX even पनि even२ vehicles सवारीसाधनको साथ आयोजना गरिनेछ। यदि लाइनहरूमा घनत्व छ भने, खाली सवारी साधनहरू सम्बन्धित लाइनहरूमा घनत्व कम हुनेछ। इस्तानबुलका बासिन्दाहरूले उनीहरूले प्रयोग गर्न चाहेको बस लाइनहरूको मार्गहरू र मार्गहरू रोज्न सक्छन्। iett.gov.t छ बाट पुग्न सक्छ।
मेट्रोबस लाइनमा, बिहान र बेलुका बढी बार उडानहरू हुनेछन्। शनिबार, मे २, मा, हरेक 23 मिनेट ० 06 र १० बिहानको बीचमा, हरेक १० मिनेट १० र १ between बीचमा, हरेक minutes मिनेट १ 10 र २० बीचको हुन्छ। २० र २ between बीचमा प्रत्येक २० मिनेट यात्रा हुनेछ।
आइतवार र भोजका अन्य दिनहरू, प्रत्येक every मिनेट ० minutes र १० बिच, मंगलबार र बुधवार, प्रत्येक १० मिनेट १० र १ between बीचमा, र हरेक minutes मिनेट १ 06 र २० बीचमा हुन्छन्। २० र २ween बीचमा, प्रत्येक १० मिनेटमा एउटा अभियान हुनेछ।
मे २ Saturday शनिबार मे २ Sunday आइतवार मे २ Monday सोमबार मे २ Tuesday म Tuesday्गलबार
06:00 - 10:00 /3मिनेट 06:00 - 10:00 /3मिनेट 06:00 - 10:00 /3मिनेट 06:00 - 10:00 /3मिनेट
10:00 - 16:00 / 10 मिनेट 10:00 - 16:00 / 10 मिनेट 10:00 - 16:00 / 10 मिनेट 10:00 - 16:00 / 10 मिनेट
16:00 - 20:00 /3मिनेट 16:00 - 20:00 /3मिनेट 16:00 - 20:00 /3मिनेट 16:00 - 20:00 /3मिनेट
20:00 - 00:00 / 15 मिनेट 20:00 - 00:00 / 10 मिनेट 20:00 - 00:00 / 10 मिनेट 20:00 - 00:00 / 10 मिनेट
IETTउनले अस्पताललाई कर्फ्यू लागू गर्न days दिन बसको व्यवस्था गरे। कम्तिमा १4वटा बस in दिनमा इस्तानबुलमा २ सार्वजनिक, २ private निजी र २ to वटा अस्पतालका लागि छुट्याइएको थियो। बसहरूले अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई काममा जाने र जाने बाटोमा उनीहरूको सेवा गर्नेछन्।
सेवानिवृत्ति छुट्टी बोनस भुक्तान गर्न सुरु भयो ..! त्यसोभए कसरी भुक्तानी गरिन्छ?
IETT, यो उत्सव मेसामा थियो
शरद Mostतुको सुन्दर दिनहरूमा सकबिसको साथ शहरको भ्रमण गर्नुहोस्
कोरोना दिवसहरूमा एंगेल्सिस्मीरका लागि नयाँ रोडम्याप
कर्फ्यूमा आईईटीटी मार्गहरू
IETT, Pendik YHT स्टेशनमा बस जडान
गोठालोहरूलाई सुसमाचार! रेखा 250 ट्रिप्स आधा घण्टाको पतन हुनेछ